Fikarohana momba ny firaisana Tranga fanalefahana ny Oscar Micheaux | Spike Lee: Afrikana amerikanina Amerikanina maneho ny fifandraisan'ny hazakazaka amin'ny fiainana roa - Fampandrenesana Reincarnation
Soso-kevitra amin'ny: ReincarnationReseach.com Mpanohana
Micheaux: Lasa zanaka mpamokatra sary ny zanaky ny andevo iray
Oscar Micheaux Teraka tamin'ny taona 1887 tany Illinois, zanaky ny andevo izay toa tompon-tany frantsay mpifindra monina. Izy no heverina ho mpanatontosa sarimihetsika afrikanina amerikana voalohany. Nanao horonantsary mangina i Micheaux ary avy eo nifindra tamin'ny sarimihetsika mandeha am-peo, mitarika sy mamokatra sarimihetsika 44 manontolo.
Ny nifantohan'ny asany dia ny olana ara-poko eo amin'ny mainty sy ny fotsy hoditra, manarona ny lohahevitra momba ny tsy rariny fanavakavaham-bolon-koditra, ny fampangirifiry, ny herisetra ataon'ny vahoaka ary ny tsy fitovian'ny toe-karena.
Ny mahaliana dia i Micheaux, tany am-piandohan'ny fiainana dia nifindra tany South Dakota, izay nividianany tany sy niasa ho tantsaha. Nanoratra izy, Ny Homesteader, izay ampahany nifototra tamin'ny zavatra niainany tany South Dakota. Ny Homesteaders dia olona nomena toerana malalaka maimaimpoana tany Amerika Andrefana amin'ny ezaka hampandrosoana ny faritra.
Nodimandry tamin'ny 1951 i Micheaux.
Oscar Micheaux dia miverina amin'ny maha Spike Lee, izay manandrana manao filma amin'ny filma
Spike Lee dia teraka tao Atlanta, Georgia tamin'ny 1957. Toa an'i Micheaux, ivon'ny sarimihetsika Lee manodidina ny fifandraisan'ny hazakazaka, tafiditra ao anatin'izany ny olana momba ny fahantrana, ny heloka bevata an-tanàn-dehibe ary ny politika ara-poko.
Amin'ny lafiny iray tena mahaliana, i Spike Lee dia niantso ny orinasa mpamokatra azy 40 Acres sy sangan'asa sarimihetsika mola, izay toa tsy fantatra tsy fantatra momba ny fiainany taloha toa an'i Micheaux, izay nividy tany tany South Dakota ary lasa mpamboly talohan'ny nanombohany ny asany amin'ny maha-sarimihetsika azy.
Raha hijery tranga hafa momba ny haino aman-jery teatra dia miangavy:
Reincarnation tranga amin'ny sary amin'ny fahitalavitra sy sarimihetsika
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana fampisehoana eo amin'ny Oscar sy Spike.
Ny filan'ny fiainana taloha, ny talenta ary fahaiza-manao: Manohy ny asan'i Oscar Micheaux i Spike Lee amin'ny fanaovana sinema mifototra amin'ny tsy rariny ara-pirazanana.